दलान नेपाल : मानवअधिकारकर्मीहरु माथी पनि शंका उब्जीएकै हुन - मोहना अन्सारी ।
आखिर यस्तो समस्या सिर्जना भयो कसरी । तपाई अनुगमनमा खटीरहदा के पाउनु भएको छ ?
- हेर्नुस हामी काहा यो वडो विडम्बना छ । हामी आफनो यर्थातालाई स्विकार गर्न चाहदैनन । मेरो आफनो वुझाई भन्नु हुन्छ भन्नु हुन्छ भने, म एक बाक्यमा भन्न सक्छू , यो सवै समस्याको जड स्विकार्यताको हो । कतै न कतै एउटा ठुलो संख्यामा रहेको नेपालको मधेशी समुदायहरुको याहा स्विकार्यता मै प्रश्न चिन्ह छ कि जस्तो लाग्छ । जब म मधेशका जिल्लाहरुमा जान्छू, अनि मानिसहरु घेरेर मलाई प्रश्न गर्छन, अनि सोध्नछ, के हामी नेपालका नागरिक होइन ।
हामी जव कर्णलीको कुरा गर्छौ तव हाम्रो मापढण्ड एउटा हुन्छ अनि रौटहटको कुरा गर्दा हाम्रो मापढण्ड अर्कौ हुन्छ । जव की हाम्रो दुवैको वारेमा समान धारणा हुनु पर्छ ।
तपाईलाई के लाग्छ, यस्तो किन भईरहेको छ ?
- हेर्नुस यसले त अब प्रष्ट भइसकेको छ कि, मानवअधिकर्मीहरु माथी पनि शंका उब्जीएकै हो । यसलाई लुकाउनुको कुनै तुक छैन । किन की हामी जसरी आफनो नागरिकहरुको वारेमा वोल्नु पथ्र्यौ, हामीले जसरी लेख्नु पथ्र्यौ, त्यसमा हामी कतै न कतै चुकिरहेका छौ । हामी मानवअधिकारकर्मीले त सम्पुर्ण नागरिकहरु संग भईरहेको गतिविधी वारेमा हामी समान ढंगले बोल्नु पथ्र्यो । कुरा उठाउनु पथ्र्यो । तर दुर्भाग्यवस हामी मानवअधिकारकर्मीहरु पनि समुदाय, जात र वर्ग विशेषको रुपमा प्रस्तुत भईरहेका छौ । अर्थात हाम्रो सम्पुर्ण क्षेत्र पुर्णरुपेण ध्रवीकृत भएर प्रस्तुत भईरहेको छ । यो भयानक डरलाग्दो कुरा हो ।
नेपालको अहिले हरेक क्षेत्र ध्रुविकृत रहेको कुरा उठाइहाल्नु भयो तपाईले । यो डरलाग्दो अवस्थावाट हामी कसरी समाधानमुखी तर्फ लाग्ने छौ त ?
- यसका लागी त त्यही हो, सवै भन्दा पहिला स्विकार्यताको सन्दर्भमा हामीले सवैका लागी समान धारणा बनाउनै पर्छ । त्यस पछि हामी सवैले सवै ठाउ वाट आ आफनो गल्तीहरु सच्याउदै अघि वढनै पर्छ । यसको विकल्प छैन ।